Na-atụgharị uche, taa, na eziokwu nke ihe ọjọọ na eziokwu nke ọnwụnwa | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa na eziokwu nke ihe ọjọọ na eziokwu nke ọnwụnwa
di Paolo Tescione - Septemba 1, 2020
Gini ka Gi na Gi n ,me, Jisus Onye Nazaret? Come bịara ibibi anyị? Amaara m onye ị bụ: Onye Nsọ nke Chineke! ”Jisus bara ya nba, si, Mechie ọnu! Si n’ime ya pụọ! Mọ ọjọ ahu we tubà nwoke ahu n'iru ha, we pua n'aru ya, emerughi ya aru. Ibobo we nwua ha nile n’aru, ha sirita onwe-ha, Gini bu okwu-Ya? N'ihi na o ji ikike na ike na-enye ndị mmụọ na-adịghị ọcha iwu, ha wee pụta “. Luk 4: 34-36
Ee, nke ahụ bụ echiche na-atụ ụjọ. Ndị mmụọ ọjọọ dị adị. Ma ọ bụ ọ na-atụ ụjọ? Ọ bụrụ na anyị elelee ihe niile mere ebe a, anyị ga-ahụ na o doro anya na Jizọs meriri mmụọ ọjọọ ahụ ma chụpụ ya n'ekweghị ka o merụọ mmadụ ahụ. Yabụ, n'eziokwu, nzọụkwụ a na-atụ ụjọ maka ndị mmụọ ọjọọ karịa ka ọ kwesịrị ịdịịrị anyị!
Mana ihe ọ na-agwa anyị bụ na ndị mmụọ ọjọọ dị adị, ha kpọrọ anyị asị ma nwee nnukwu agụụ ibibi anyị. Yabụ, ọ bụrụ na nke ahụ anaghị atụ ụjọ, o kwesịrị opekata mpe mee ka anyị nọrọ ọdụ ma payaa ntị.
Ndị mmụọ ọjọọ bụ ndị mmụọ ozi dara ada na-ejigide ike ha. Ọ bụ ezie na ha agbakụtawo Chineke azụ ma mee omume ịchọ ọdịmma onwe ha nanị, Chineke adịghị anapụ ikike okike ha ọ gwụla ma ha mesiri ha ike ma chigharịkwuru Ya maka enyemaka. Ya mere, gịnị ka ndị mmụọ ọjọọ nwere ike? Dị ka ọ dị n’etiti ndị mmụọ ozi dị nsọ, ndị mmụọ ọjọọ nwere ikike okike nke nkwukọrịta ma na-emetụta anyị na ụwa anyị. E nyere ndi mo-ozi nlekọta nke ụwa na ndụ anyị. Ndi mo-ozi ndi daalu site na amara we choo iji ike ha kari uwa nile na ike ha ichota ma soro ayi kwurita okwu maka ihe ojo. Ha agbakụtawo Chineke azụ ma ugbu a, ha chọrọ ịgbanwe anyị.
Otu ihe nke a na-agwa anyị bụ na anyị ga na-eme ihe n'ụzọ nghọta mgbe niile. Ọ dị mfe ịbụ onye mmụọ ọjọọ ụgha na-anwa ma duhie. N'okwu ahụ dị n'elu, nwoke a dara ogbenye sooro mmụọ ọjọọ a rụkọọ ọrụ nke na o jidere ndụ ya n'ụzọ zuru oke. Ọ bụ ezie na ọkwa ahụ na njikwa anyị dị obere, ọ nwere ike ime. Otú ọ dị, ihe kachasị mkpa bụ na anyị ghọtara ma kwere na ndị mmụọ ọjọọ dị adị ma na-achọ mgbe niile iduhie anyị.
Mana ozi oma ahu bu na Jisos nwere ike nile n’aru ha ma o ghaghi iru ha n’ihu ma merie ha ma o buru na anyi choro amara ya ime.
Tugharia uche taa na ihe joro njo na ihe ojo nke ndi mo ojo n’uwa nka. Anyị ebiela ha niile. Onweghi ihe anyi g’atu oke egwu. Ha ekwesịghịkwa ịhụ ha n’ụzọ dị oke egwu. Ndị mmụọ ọjọọ dị ike, mana ike Chineke na-enwe mmeri ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka Ọ chịkwaa. Ya mere, ka ị na-atụgharị uche na ihe ọjọọ na ọnwụnwa ndị mmụọ ọjọọ, ị na-atụgharịkwa uche n'ọchịchọ Chineke ịbanye ma mee ka ha ghara ịdị ike. Kwe ka Chineke bute ụzọ ma tụkwasị obi na Chineke ga-emeri.
Onye nweayi, mgbe anwara m ọnwụnwa na mgbagwoju anya, biko bịakwute m. Nyere m aka ịmata ajọ onye ahụ na okwu ụgha ya. Ka m chigharịkwuru Gị Onye Pụrụ Ime Ihe Niile n'ihe niile, ka m tụkwasịkwa obi na enyemaka nke ndị mmụọ ozi dị nsọ nke enyerela m n'aka m. Jesus ekwere m na gị.